USteve Wozniak uphinde axhase iApple ngokuchasene ne-FBI kwi-TBS | IPhone iindaba
U-Steve Wozniak ubuyela ukuxhasa i-Apple ngokuchasene ne-FBI kudliwanondlebe nge-TBS
USteve Wozniak udliwanondlebe kwiConan Show
Umququzeleli we-Apple, Steve Wozniak Wayengomnye wabantu abachaphazelekayo kwihlabathi lobuchwephesha ababemele inkampani eyayisungula kunye no-Steve Jobs ekhusela ubumfihlo babasebenzisi kunye nesicelo se-FBI, esisiseko, efuna ukufikelela kubasebenzisi bolwazi lomntu wonke, nokuba hayi sizizaphuli mthetho. Uyenzile kwakhona izolo ebusuku, ngeli xesha kudliwanondlebe noConan O'Brien kwi-TBS.
Kumboniso, uWozniak uthethe malunga FBI bathathe elona tyala lingabalulekanga babenokulichola, lelo leefowuni ezimbini zezabo abantu ababengengabo abanqolobi kananjalo babenxibelelene nobunqolobi nangayiphi na indlela, kungasathethwa ke ukuba babengenayo ingxelo yobundlobongela. Ngamanye amagama, ityala labantu ababini abaqhelekileyo, abanobomi obuqhelekileyo nabathobela umthetho. Obu bubungqina bokuba i-FBI ifuna ukufikelela kuyo yonke into, nokuba ingubani na.
USteve Wozniak uthetha nge-FBI kunye neenjongo zayo
“UVerizon uhambise lonke ushicilelo lwefowuni kunye nemiyalezo yeSMS. Ke into abayifunayo kukusebenzisa le fowuni kwezi zimbini zingakhange zonakalise- eyayiyifowuni yomsebenzi - kwaye iyonqena kwaye ayinaxabiso ukuthembela ukuba kukho into kuyo kwaye uzame ukunyanzela iApple ukuba iyiveze.
Ngokumalunga nokwenziwa kwesoftware ekhethekileyo evumela ukukhubaza amanqaku okhuseleko kwaye evumela ukuba ubukrwada bunyanzelise ikhowudi yokhuseleko, into ebiziweyo URhulumente Ngokubhekisele kwinto yokuba iya kuba yinkqubo yokusebenza eyenziweyo ukuze oorhulumente abohlukeneyo babenolawulo olupheleleyo kuyo, uWozniak ucacisa ubungozi abasebenzisi abaza kutyhilwa kubo:
Amaxesha ambalwa ebomini bam, ndizamile ukubhala into enokusetyenziswa njengentsholongwane enokuthi isasazeke phakathi kweekhompyuter zeMacintosh. Rhoqo, ndiye ndalahla yonke ikhowudi endiyibhalileyo. Ndandisoyika kakhulu ngaphakathi kuba awufuni ukushiya into enjalo ngaphandle. Nje ukuba wenze into enjalo, kukho ithuba elihle lokuba imigewu ingene..
UWozniak ngumseki ngokudibeneyo IFree Frontier Foundation (EFF), umbutho ongenzi nzuzo onjongo zawo ikukukhusela amalungelo abantu kubuchwephesha kwaye, kwelinye icala, umseki we-Apple, ngenxa yoko akufuneki kusothuse nakancinci ukuba ijikeleze i-FBI kule meko. Uneengxelo zakhe kudliwanondlebe noConan O'Brien kule vidiyo ilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » U-Steve Wozniak ubuyela ukuxhasa i-Apple ngokuchasene ne-FBI kudliwanondlebe nge-TBS
Yonke le yindawo yemidlalo yeqonga yokwenza ingxabano kunye nokunyusa ukuthengisa kuka-Apple. Obu buchule busebenza namagcisa kwaye kutheni kungenjalo ngeApple? I-FBI iya kuhlala ifikelela kubasebenzisi beenkcukacha zabucala njengoko kungenjalo banokuhlelwa njengabachaphazelekayo kulwaphulo-mthetho kwaye bangasebenzisani nophando. Le eseki iyilwa yi-United States ukuze izuze kwintengiso kwi "Genius" yayo uSteve Jobs kwaye iapile ayilibaleki.
Kububudenge, iApple ayinakuhlelwa njengomphelelisi wolwaphulo-mthetho, kuba enye yezona ndawo zibalulekileyo zokuziphatha kunye nobuchwephesha kwishishini lobuchwephesha kukukhusela idatha yomsebenzisi, kwaye kucaciswa ngumthetho.
Akunjalo nje ngokuba 'awuyi kundinika idatha endiyifunayo? Emva koko ulilungu lolwaphulo-mthetho ', kuba ukuba usebenzisa umthetho ukwenza loo ngxelo, ngalo mthetho u-Apple uya kuzikhusela ngomthetho wokhuseleko lwabathengi ukuze ungabaniki iindlela abazicelayo.
Ukuba oku kuya ngaphezulu, igama lokugqibela liya kuba yijaji, eyakuthatha isigqibo sokuba ngowuphi umthetho othathwa njengongaphezulu kule meko.
I-Apple Maps ibandakanya ezinye iindawo ezingama-23 ukuya kwiFlyover, kubandakanya iSalamanca kunye neSan Sebastián
UTim Cook udibana nabanye oosozigidigidi ukuxoxa ngoDonald Trump